Baolina keramika, boribory keramika, baoritra vita am-boasary amidy - Zhongtai
Sivana vita amin'ny seramika
Fonosana tilikambo ceramic
Fonosana Tilikambo vy
Fonosana Tilikambo plastika
Fanamainana rano Ball Ceramic
Haino aman-jery sivana Aquarium
Ny volana jolay 2018 dia nitsidika ny orinasanay ny mpanjifa Koreana hividy ny vokatra seramika anay. Ny mpanjifa dia tena afa-po amin'ny prod ...
Ny vaovaon'ny fampirantiana
Amin'ny volana oktobra 2019, mandeha any amin'ny Guangzhou Canton Fair izahay hihaona amin'ireo mpanjifantsika amerikana tatsimo.
Famoronana vokatra / indostrialy
Fonosana Tower Tower Ring Pall
Fonosan'ny Tower Saddle Metal Intalox
SS304 SS316 metaly mitafo vy vita amin'ny fonosana vita amin'ny vy
Famonosana Tower Tower Sadalo Ceramic Intalox
Alumina Grinding Ball ampiasaina amin'ny fikosoham-bary
RTO Ceramic Honeycomb Exchange
Kitapo plastika Super Intalox Saddle Ring Packing
Fonosana baolina plastika Tri-Pak ho an'ny fitsaboana rano
25 38 50 76 mm fonosana tilikambo plastika
Pingxiang Zhongtai Environmental Chemical Packing Co., Ltd dia naorina tamin'ny 2003, mpanamboatra matihanina sy mpanondrana izay manana traikefa mihoatra ny 10 taona amin'ny famonosana simika. Izahay dia hita ao amin'ny West Section Hi-Tech Industry Park Pingxiang City, faritanin'i Jiangxi, miaraka amin'ny fidirana fitaterana mety. Ny vokatray rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao ary ankafizinay indrindra amin'ny tsena isan-karazany eran'izao tontolo izao.
Ny volana jolay 2018 dia nitsidika ny orinasanay ny mpanjifa Koreana hividy ny vokatra seramika anay. Ny mpanjifa dia tena afa-po amin'ny famokarana kalitao amin'ny famokarana sy ny serivisy aorian'ny varotra. Manantena izy fa hiara-hiasa amintsika mandritra ny fotoana maharitra.
Tamin'ny volana oktobra 2019, mandeha any amin'ny Guangzhou Canton Fair izahay hihaona amin'ireo mpanjifantsika amerikana tatsimo.
Dia ny ekipanay nankany Sanya, Hainan
Tamin'ny volana jolay 2020, nikarakara dia nankany Sanya, Hainan nandritra ny herinandro ny ekipanay, Ity dia nahatonga ny ekipanay manontolo hiray hina kokoa. Taorian'ny asa mafy dia nilamina izahay ary nametraka ilay asa vaovao tao anaty toe-tsaina tsaratsara kokoa.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Mey 2021, nanatitra fonosana plastika 300 metatra toratelo ho an'i Qatar izahay. Nahafantatra an'ity mpanjifa ity izahay dimy taona lasa izay, nahafinaritra tokoa ny fiaraha-miasa. Ny mpanjifa dia afa-po amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny serivisy aorian'ny fivarotana. ...
NO.65, East Road Of Dengan, Zone fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia, Pingxiang, Jiangxi, Sina
86-18270997020 / 86-13979922265